शिक्षा मन्त्री श्रेष्ठलाई विद्यार्थीहरुले मन्त्रालयमै थुनेपछि...! - Naya Patrika
शिक्षा मन्त्री श्रेष्ठलाई विद्यार्थीहरुले मन्त्रालयमै थुनेपछि…!
सन्तोष भट्टराई , काठमाडौं ,२७ असोज | असोज २७, २०७४
संयुक्त विद्यार्थी संगठनले शिक्षा मन्त्री गोपालमान श्रेष्ठलाई सिंहदरबारस्थित कार्यकक्षमै थुनेर नारावाजी गरेका छन् । करिब २० मिनेट जति कार्यकक्षमा थुनेर नाराबाजी गरेका थिए । मन्त्रालयमै रहेका शिक्षा मन्त्रीले विद्यार्थी नेताहरुलाई समय उपलब्ध नगराएपछि आक्रोशित बन्दै मन्त्रीलाई थुनेर नारावाजी गरेका हुन् ।
सिटिभिटीलाई दिएको सम्बन्धन खारेज गर्नुपर्ने, नवौं शिक्षा ऐन तत्काल खारेज गर्नुपर्ने लगायतका माग राखी विद्यार्थीहरुले आन्दोलन गर्दै आइरहेका छन् । विहिबार मन्त्रीका सम्पुर्ण कार्यक्रम बहिस्कार गर्ने निर्णय गरेको कांग्रेस निकट नेविसंघ बाहेकका विभिन्न संगठनहरुले मन्त्रीलाई जानकारी गराउन पुगेका थिए । तर, कार्यकक्षमै रहेका मन्त्रीले विद्यार्थी नेताहरूलाई समय नदिएपछि त्यही नारावाजी गर्दै कोणसभा गरे ।
विद्यार्थीहरुलाई मन्त्रीले समय दिन नमान्नु खेदजनक कार्य भएको भन्दै अनेरास्ववियुकी अध्यक्ष नविना लामाले रोष प्रकट गरिन् । शिक्षा क्षेत्रलाई तहसनहस पार्न खोज्ने शिक्षा मन्त्री विद्यार्थीमाझ कलंक सावित भएको भन्दै अनेरास्ववियुका उपाध्यक्ष रश्मि आचार्यले आक्रोश पोखे । शिक्षा मन्त्रीले चोरबाटोबाट नवौं शिक्षा ऐन ल्याएर शिक्षा क्षेत्रलाई दलालीकरण, माफियाकरण भ्रष्टाचारको चंगोलमा फसाएको अखिल क्रान्तिकारीका उपाध्यक्ष सुरेन्द्र बस्नेतको आरोप छ । लाखौं विद्यार्थी योग्य शिक्षकबाट पढ्न पाउने अधिकारलाई कुन्ठित गर्ने काम मन्त्रीबाट भएको भन्दै आक्रोश पोखे । उनले लाखौं विद्यार्थीको भविष्य अन्धकारमा धकेल्ने उक्त ऐन, सिटिभिटीलाई दिएको सम्बन्धन खारेज गर्न माग गरे ।
मेडिकल शिक्षण संस्थाले मनाेमानी शुल्क उठाइरहेको र त्यसलाई अविलम्ब कारबाही गर्न पनि उपाध्यक्ष बस्नेतको माग छ ।सिटिभिटीलाई दिएको सम्बन्धन खारेज नगर्दासम्म, मेडिकल कलेजहरुले तोकिएको मूल्यमा पठनपाठन नगराउदासम्म, नवौं शिक्षा ऐन खारेज नगर्दासम्म मन्त्रीलाई पूर्ण असहयोग गरि आन्दोलन जारी राख्ने बस्नेतले जानकारी दिए ।
संयुक्त विद्यार्थी संगठनका नेताहरुले नवौं शिक्षा ऐन समग्र विद्यार्थीहरुको प्रतिकुल रहेको भन्दै हिजो राष्ट्रपति विद्या भण्डारीलाई सो ऐन प्रमाणीकरण नगर्न आग्रहसमेत गरेका छन् । संयुक्त विद्यार्थीहरुमा एमाले निकट अनेरास्ववियु, माओवादी केन्द्र निकट अखिल (क्रान्तिकारी), नयाँ शक्ति निकट नयाँ शक्ति विद्यार्थी युनियन, नेकपा निकट अखिल (क्रान्तिकारी) लगायतका ९ वटा विद्यार्थी संगठन रहेका छन् ।